Mareykanka oo xaqiijiyay in weerar cirka lagu dilay Sheekh Maxamed Dulyadeyn | Baydhabo Online
Mareykanka oo xaqiijiyay in weerar cirka lagu dilay Sheekh Maxamed Dulyadeyn
Mareykanka, ayaa waxaa uu xaqiijiyay in weerar cirka ah oo ka dhacay Koonfurta Somaliya lagu dilay Sheekh Maxamed Maxamuud Cali (Dulyadeyn) oo sidoo kale loo yaqaanay (Kuuno Gacmadheere), kana tirsanaa Saraakiisha Ururka Al Shabaab.
Bayaan uu soo saaray Taliska Ciidamada Mareykanka ee Afrika, fadhigiisuna uu yahay Magaalada Stuttgart ee dalka Jarmalka, ayaa lagu sheegay in Sarkaalkaasi lagu dilay weerar 31-kii bishii hore ee May ka dhacay Koonfurta Somaliya.
Bayaanka, ayaa lagu sheegay hawlgalkan oo ay horkacayen cutub ka tirsan Militariga Somaliya in uu ka dhacay Deegaanka Buulo Gaduud, oo 29km u jirta Magaalada Kismaayo.
Sarkaal sare oo ka tirsan Dowladda Somaliya, ayaa VOA u sheegay in diyaaradaha qumaatiga u kaca Mareykanka ay gantaalo ku dhufteen gaari uu la socday Sheekh Maxamed Dulyadeyn
Bayaankan waxaa sidoo kale lagu sheegay hawlgal kale oo ka dhacay Koonfurta Somaliya 29-kii May in lagu dilay C/laahi Xaaji Daa’uud, oo xubin ka ahaa Saraakiisha Al Shabaab.
“Waxaan ku kalsoonahay in labadan hogaamiye ee sar sare ee la khaarajiyey ururka argagixisada ah ee Al-Shabaab ay baajin karto weeraro dhow oo ay kooxdu qorsheyso, isla-markaana ay badbaadin karto nolosha dad badan oo aan waxba galabsan.” Ayaa lagu yiri Bayaanka.
“Dowladda Mareykanka waxaa ka go’an taageerista Dowladda Somaliya, Ciidamada Dowladda iyo kuwa Amisom, sidii looga adkaan lahaa Al Shabaab, Somaliyana ay u noqon laheyd meel xasiloon.” Ayaa lagu yiri Bayaankaasi.
Ururka Al Shabaab, ayaan illaa iyo hadda war rasmi ah ka soo saarin weerarada looga dilay labada Sarkaal, iyadoo Maxamed Dulyadeyn loo haystay in uu ka masuul ahaa weerarkii 2-dii April ee sanadkii hore lagu qaaday Jaamacadda Magaalada Garissa, laguna dilay 147 ruux oo arday u badneyd.